Agụmakwụkwọ Mmụta Ntanetị, Onye Nkuzi China, Mụta Chinese Online - Huayu
Hergbaso isi echiche nke "mgbanwe ọdịnala, asụsụ nke mbụ", ụlọ akwụkwọ ahụ nakweere ọnọdụ bụ isi nke "ndị nkuzi na China, ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa" iji kụzie nkuzi ndị China.
Typedị nkuzi a na-akpali akpali bụ nke kachasị dị irè! N'agbanyeghị nke ahụ, n'ihi ọtụtụ ntinye akwụkwọ, enwere ndepụta echere ugbu a iji gaa nzukọ ahụ
N’ebe a, ị gaghị ahụ naanị onye nkuzi na-atọ ọchị, kamakwa inyere nwa gị aka ịchọta onye ya na ya ga-amụ ihe, ka ị ghara ịnọ naanị gị ịmụ asụsụ Chinese.
Nomi na-ekwusi ike na ihe ọhụrụ ma na-agbaso ihe nlereanya nke +ntanetị + Mmụta iji bulie onwe anyị oge niile ma bulie ahụmịhe onye ọrụ.
Nke anyi Akụkọ
Ihe kariri umu akwukwo 500 amutala anyi Chinese ma anyi natara otutu otuto site na ndi nne na nna na umu akwukwo n’uwa nile.
- Mama mama Jay
Kedu ebe dị mfe iji mụọ ọkụkọ ...
Ọtụtụ ndị na-ekwu na ịmụ asụsụ Chinese siri ike. N'ezie, ọ bụghị. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na mkpụrụedemede ndị China chọrọ nkuzi nke iburu n'isi, asụsụ China dịkwa mfe ma e jiri ya tụnyere asụsụ ọzọ ...
N'oge na-adịbeghị anya, nwa akwụkwọ nwere ntọala efu zuru oke, mgbe ọ mụsịrị klaasị atọ, gwara m na ya ga-agbanwe na onye nkuzi nke pụrụ iche na Bekee n'ihi na ọ chọghị ịmụ ụtọ asụsụ China ma ọ bụ HSK-rel ...
ele niile ozi ọma
Nomi Chinese online bụ ụlọ ọrụ ntanetị na-akụzi ihe n'ịntanetị nke Ningbo Huayu Network Technology Co., Ltd. Nomi bụ ebe ndị niile hụrụ ọdịbendị ndị China n'anya n'ụwa niile iji mụta, ịnwe ma kwukọrịta. Hergbaso echiche bụ isi nke "mgbanwe ọdịbendị, asụsụ nke mbụ", ụlọ akwụkwọ ahụ nakweere usoro bụ isi nke "ndị nkuzi na China, ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa" iji duzie nkuzi ndị China.
Nomi na-ekwusi ike na imeputa ihe ma nabata ihe nlere anya nke plusntanetị tinyere Mmụta iji meziwanye onwe anyị oge niile ma bulie ahụmịhe onye ọrụ.
Anyị ”Otu-na-ọtụtụ, na mmekọrịta dabeere” isi ozizi ngwaahịa a ọma oru na ọtụtụ mba gburugburu ụwa na ọtụtụ otuto site esenidụt ụmụ akwụkwọ.
mụta ihe n'obi gị ， obi ụtọ na-eso.